Ikhamera eVunyiweyo eKhanyayo eKhanyayo, SDCard 32GB max, Ibhetri: 1000mAh (SPY017) | Izisombululo ze-OMG
I-SPY017 - I-OMG Mini ephathekayo yokuHlola efihliweyo-720P, SDCard 32GB max, Ibhetri: 1000mAh
I-Mini Spy eyiKhamera efihliweyo 720P kunye neMboniselo yoBusuku kunye ne-PIR Motion Sensor Detection, iVideo ephathekayo kunye neKhamera yezwi kunye ne-1000mAh ye-Battery Max 1 ngonyaka
Ikhamera efihliweyo edibeneyo edibeneyo: Ukwahluke kwezinye iikhamera ezifihliweyo, inentloko ejikelezayo, unako ukujikeleza ikhamera kwiindlela ezihlukeneyo zeengxube ezahlukeneyo. Ngendawo ephantsi, unokukufihla ngokucacileyo kwi-bookcase okanye kwikhefu ukuze uqiniseke ukuba akukho mntu uhlawula izinto zakho, ukulungele iofisi, ukuhamba, ukugcina nokugcina ukhuseleko ekhaya.
I-Night Night Vision Imbonakalo efihliweyo: Ngama-LED omnyama ase-6, i-kamera efihliweyo encinane inokusebenza ebusuku ngobuninzi bobubanzi obunobusuku ukuya kwi-15 ukuya kwii-25 ezinyaweni, ezingcono kunezinye iikhamera zembono ebusuku. Ungayisebenzisa emini nasebusuku, zombini imifanekiso yevidiyo imnandi kwaye icacile kwi-1280 x 720p HD.Ilizwi liphezulu kwaye licacile.
Ukufumanisa okuhamba phambili kweeNkcazo zeKhamera: Nge-sensor ye-PIR motion, inokusebenza kakuhle kwimodi yokufumanisa inkqubela, ungayibeka phantsi kwaye uyishiye apho, xa ikhutshwe nayiphi na umzuzu, iya kuvula ikhamera ukuba ibhalise ngokukhawuleza. Nge-battery ye-1000 mAh eyakhelwe, ikhamera ye-spy isekela kwi-1 ngonyaka (ixesha elide kunabanye abakhuphisanayo) kwimodi yokulinda yokunyakaza. Qaphela: Kwimodi yokujonga inkqubela, i-lens yekhamera kufuneka igcine ucwangciso olufanayo ne-PIR sensor.
Loop Ukurekhoda Ikhamera ephathekayo: Ikhamera ye-nanny ephathekayo isekela amakhadi e-10 microSD kunye ne-8 GB kunye ne-32GB yamandla (ikhadi le-microSD alifakiwe) ukurekhoda kweloop. Xa ikhadi lizele, liya kubhala ngokuzenzekelayo iifayile zevidiyo ezindala.
Oko Ufumanayo: Ikhamera efihliweyo, ikhamera ye-USB encinci, ipini, incwadi yomsebenzisi, kunye ne-fan-favorite ye-12-inyanga yesiqinisekiso
Ukunyuswa komzimba kwe-PIR kusebenze ukurekhoda ixesha elide ukuya kwi-1 ngonyaka.
I-angle ye-120 degree ephakamileyo kunye ne-lens ejikelezayo ngokubanzi ikhulisa umbono wakho wokudubula.
Ividiyo ecacileyo yexesha lombala kunye nombono wobusuku obumnyama obumhlophe. (I-6pcs ibhokhwe ebumnyama ayiyi kukhanya ngokusetyenziswa)
Irekhoda yombhalo: Ixesha losuku lokurekhoda ngokuqhubekayo ukuya kwii-4 iiyure kunye nobusuku obonakalayo obuqhubekayo ukurekhoda kwii-1.5 iiyure xa ikhamera ihlawuliswa ngokupheleleyo.
Yakhelwe kwi-1000mah ibhetri ehlawulelwayo ukuze kubekwe lula kunye nokusetyenziswa okuphathekayo.
Ukuxhaswa kwekhamera ukuya kwi-32GB ikhampasi ye-sd khadi (ifomathi yeFAT32) (engabandakanywa).
Umsindo unokutshintshwa kalula okanye ukhutshwe ukusuka phantsi kwekhamera.
Amabhonkco amaqhosha kunye nezikhombisi-myalelo kulula ukuyiqonda nokusebenzisa.
Usuku olulungisiweyo kunye netime watermark kwividiyo.
Ukusetyenziswa kakubi kwiofisi, ukuhamba, isitolo, ukhuseleko lwasekhaya. (iintsapho, izifuyo, i-nanny, abantu abadala)
I-angle ye-120 degree ephakamileyo kunye ne-180 degree ejikelezayo ngokubonakalayo kwandisa ukujonga kwakho.
Umbono woBusuku boBusuku
I-6pcs i-LED emnyama ejikeleze i-lens engabonakaliyo kwaye igubungele. (I-LED ayifaki ukusetyenziswa) kunye nombono webusuku ufikelela kwi-15 ukuya kwi-25 inyawo.
Eyakhelwe kwi-1000mAh Ibhetri engabuyiselwayo
Ukurekhoda ngesandla ngethuba lexesha lokurekhoda ngokuqhubekayo ukuya kwii-4 iiyure kunye nobusuku obubonakalayo oburekhodwayo ukuya kwiiyure ze-1.5 xa ikhamera ihlawuliswa ngokupheleleyo.
Yobungakanani: 2.5 × 1.4x1inch
Isisindo somnatha: I-9.6 ounces
Ukusetyenziswa kwamandla: 10uA
I-angle yokubona i-PIR: I-60 degrees
Ibanga lokubona i-PIR: 15-25 iinyawo
I khamera yekhamera: I-120 degrees
Ukuma kwe-Max PIR ngexesha: 1 kunyaka
Ukusetyenziswa kwamandla ngexesha lokugcina: 220mAh
Isikhathi sokurekhoda kwexesha elinguMax: iiyure 4
Ukusetyenziswa kwamandla okumbona ebusuku: 650mAh
Umbono wobusuku obuphezulu ubhala ixesha: iiyure 1.5
Ixesha lokuhlawula ngokupheleleyo: iiyure 3.5
I-PIR MD irekhodi yevidiyo: Ngomzuzu we-1 nganye kwifayile
Rekhoda ngokuqhubekayo: malunga nomzuzu we-10 nganye kwifayili
Ukugcinwa kweM Max SD: 32GB
Ukurekhoda kweLoop: inkxaso
4.3 x 3.1 x 2.1 intshi
5739 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-9 Namhlanje